व्यक्तिगत आवास निर्माण को लागि भूमि को प्लट - सल्लाह।
भूमि जमीन जायदाद को चयन मा सल्लाह।
शहर बाहिर स्थित (को घरेलु व्यक्तिगत आवास निर्माण को लागि भूमि) आवास को लागि शहर मा सम्पत्ति को विनिमय - भर्खर त्यहाँ एकदम नियमित प्रवृत्ति छ। यो बुझ्ने छ, धेरै मान्छे एक घर वा घरेलु र निर्माण मा नयाँ प्रविधीहरु को विकास मा हालको अवस्था निर्माण गर्न सपना व्यावहारिक हरेक परिवार achievable छ। यसलाई आफ्नै विचार को विकास को एक सदिश चयन गर्न मात्र आवश्यक छ। निस्सन्देह, जीवनको प्रकृति मा धेरै सहज र स्वस्थ छ। आफूलाई अनावश्यक निकास वाफ र धूलो देखि रक्षा गर्न मात्र देश जाने पछि सम्भव छ। सडक junctions र त्यहि 15-30 मिनेट (एक व्यक्ति शहरमा बिताउनुहुन्छ कि) सार्वजनिक परिवहन द्वारा काम गर्न यात्रा गर्ने क्षमता को निकटता, हामीलाई निर्धक्क भन्न अनुमति दिन्छ कि देशमा एक घरेलु सबैभन्दा उत्तम विकल्प आवास को लागि। र मान्छे छैन भने सबैभन्दा भवन राम्रो पूर्वाधार क्षेत्रमा अवस्थित छन् रूपमा, शहर आउन कुनै आवश्यकता छ, राम्ररी योग्य अवकाश आउन गर्दा।
बिक्री जस्तै लागि भूमि त्यहाँ पैसा छ जब, मुश्किल छैन, तर ....
व्यक्तिगत आवास निर्माण को लागि भूमि छनौट गर्दा पहिलो केही उपयोगी सुझाव निर्देशित हुनुपर्छ। तिनीहरूलाई को एक पहिले नै माथि सुनिन्थ्यो छ। अर्को चरण जहाँ तपाईं बाँच्न चाहनुहुन्छ गर्नुभयो निर्णय छ? जंगल छेउमा? कस्तो हुनुपर्छ पाइन: काठ वा मिश्रित? ताल, वा महंगा नजिकै (सुविधाको लागि चाँडै सार्वजनिक यातायात बाहिर जाने)।
ठूलो निश्चितताका लागि आफ्नो विकल्प मा खोज बाकसमा टाइप ठाउँ को नाम इन्टरनेटमा गाउँमा बारेमा जानकारी पाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। एक ठाउँमा जाने र सल्लाह को लागि अनुरोध गर्न, मान्छे संग कुराकानी बाँच्न निश्चित हुनुहोस्। मानिसहरू तिनीहरू बाँच्न ठाउँ मन गर्दा प्रतिक्रिया गर्न इच्छुक छन्। सायद यो भूमि विकल्प मा तपाईं विश्वस्त थप्न हुनेछ।
भूमि को चयन मा मुख्य अंक को एक - ठ्याक्कै उत्पादन को मूल्य मा समावेश गरिएको छ के को मूल्य बुझ्न छ। भूमि को मूल्य सबैभन्दा अक्सर को लागत समावेश ग्याँस पाइपलाइन, पहुँच सडक निर्माण, सुरक्षा वा बिजुली को जडान को संगठन। त्यहाँ बिजुली संग एक ग्याँस पाइप वा पोल अर्को छ र त्यसैले, देशमा अधिक महंगा छ भन्दै, को तर्क र प्रस्ताव विक्रेता मा किन्न छैन। आफैलाई लागि पत्ता, तर यो जडान गर्न सम्भव छ? त्यहाँ बिजुली वा ग्याँस जडान लागि पर्याप्त क्षमता छ। यो क्षेत्र कायम राख्न लागि जिम्मेवार छन् जो स्थानीय कार्यालय, मा फेला पार्न सम्भव छ। निस्सन्देह, यी तिनीहरूले समय संग आउनेछ भन्न किनभने उपयोगिता बाँकी, रूप, भविष्यमा आफ्नो रहन को लागि मुख्य सामाग्री छन्। तिमी, स्वायत्त ढल राख्न सक्छ एक प्वाल ड्रिल , आदि
एक षड्यन्त्र खरिद गर्दा ध्यान दस्तावेज pokuyte साइटहरु मात्र मालिक बाट वा मार्फत पहिले नै बजार मा आफूलाई सिद्ध गरेको अचल सम्पत्ति एजेन्सीहरू जाँच गर्नुहोस्। तपाईं खरीद रहे के ध्यान। व्यक्तिगत आवास निर्माण को लागि भूमि को एक षड्यन्त्र प्रत्येक प्रमाणपत्र, तपाईं भूमि श्रेणी र अनुमति प्रयोग देख्ने: भूमि को श्रेणी - व्यक्तिगत आवास निर्माण को लागि - भूमि बन्दोबस्त, प्रयोग अनुमति। भूमि को यस वर्गमा मात्र होइन समावेश एक भवन अनुमति घर वा घरेलु, साथै ठेगाना को दर्ता। भूमि सबै प्रयोगहरू साइट जमीन-prodazha.rf मा पाउन सकिन्छ।
को cadastral नम्बर प्रविष्ट गरेर सार्वजनिक नक्सामा साइट को निर्देशांक जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस्। र सबै को सबै भन्दा राम्रो नक्सा एक उपग्रह र आफ्नो समकक्षमाटेलिस्कोपलक्षितसमकक्षसेटगर्नुहोस् जाँच cadastral नम्बर क्षेत्र (जस्तै सम्पत्ति एजेन्सी) मा विशेषज्ञहरु को।
सल्लाह सम्झना: देशमा किन्न - भूमि बसोबास (बस्तियों) व्यक्तिगत आवास निर्माण को लागि सही समाधान संग, यो हाम्रो विशेषज्ञहरु मदत गर्नेछ।
उसोभए, तपाईं पहिले नै देशमा को विकल्प मा निर्णय गरेका छौं भने, त्यसपछि एक घर बनाउन वा घरेलु तपाईं एक घरेलु-zemlya.rf को कम्पनी हुनेछ।
रेलवे मा रियल एस्टेट: सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्यहरू मास्को किनमेल गर्न
कसरी miscalculate छैन अपार्टमेन्ट बेच्न?
अपार्टमेन्ट फाइदा र यसलाई आवश्यक छ कि छैन को बुरा को निजीकरण - निजीकरण?
सबैभन्दा लामो भवन संसारमा कहाँ छ?
म Akademgorodok मा एक घर खरीद गर्दा के हेर्नुपर्छ?
Tempur - हाडजोर्नी तकियों: समीक्षा
जहाँ आफ्नो साथीहरूसँग ओरेनबर्ग जाने?
हात को tendons: को anatomical संरचना, सुनिंनु र क्षति
माछा मछली: सरल व्यञ्जनहरु
बिरालोहरु र आफ्नो लक्षण को सबै भन्दा साधारण र खतरनाक रोगहरु
केटाहरू तपाईंको पछि कसरी चलाउन बनाउने: आत्मनिर्भर विकास गर्नुहोस्